Uhla lwe-imeyili yabaqondisi be-Marketing Directors | Uhlu LwamakheliLondolozi Lwamakheli we-imeyili
Izinhla Zokuxhumana ze-imeyili zabaqondisi
Database lakamuva Lokuposa » Izinhla Zokuxhumana ze-imeyili zabaqondisi
Ikheli le-imeyili Abaqondisi Bokumaketha
Abaqondisi Bokumaketha Abaqondisi be-imeyili ngayo yonke imininingwane yokuxhumana ebuyekeziwe ye-United States. Ungasebenzisa le database ye-imeyili ukuthumela imikhiqizo yenkampani yakho enikela ngalo muntu wemenenja yokumaketha. Ngoba, le datha iyi-90% inembile futhi ihlanzekile. Uma ufuna ukuthola imenenja yabaqondisi bezokumaketha i-imeyili evela kwelinye izwe sicela usazise. Ngakho-ke, Sizokwakha noma yiluphi uhlu lwama-imeyili wokuphatha wesifunda. Umphathi omkhulu wezentengiso noma umqondisi wokukhangisa yisikhulu sebhizinisi esibhekele imisebenzi yezentengiso enhlanganweni. Ngakho-ke, Sizokunikeza ikheli lalolu hlobo lwamakheli asuka ezweni lomhlaba. Ngenxa yalokhu, Uma udinga noma yiluphi usizo ngalokhu sicela usazise. Futhi, yakha uhlu lwamakheli okubhekiswe kuwo izihloko ezinjenge-CEO, i-CFO, i-CMO, i-COO, i-CTO, i-CIO, oMongameli, uSihlalo, GM, MD, Umphathi kanye nezinye eziningi.
Thenga Izinhlu Ze-imeyili Zokukhangisa Zabahambisi Bamuva
Inani lamarekhodi: 158,785
Izindleko Eziphelele: $ 3,478
Abaqondisi Bokumaketha I-imeyili Uhlu Lombuzo Nempendulo